Inqubomgomo Yobumfihlo yeFXCC | Indlela esisebenzisa ngayo ulwazi esinokuqokelela
Inqubomgomo Yobumfihlo yeFXCC
2. UKUPHATHWA KWENQUBO YOMGAQOQO
3. UKUBHALA KOLWAZI
4. UKUSETYENZISWA KWEENKCUKACHA ZAKHO
1. Ukusebenza kwesivumelwano
2. Ukuthotyelwa komthetho
3. Ngenjongo yokukhusela iminqweno esemthethweni
4. Ngeenjongo zoshishino zangaphakathi kunye nokugcinwa kwerekhodi
5. Izaziso zomthetho
6. Ngeenjongo zokuThengisa
7. Ukusinceda ekuphuculeni iimveliso zethu kunye neenkonzo
5. UKUQALA KWENKCUKACHA YAKHO
6. QHUBEKA KWIINKONZO ZENKQUBO
7. INDLELA NGOKUBA SIPHUMA IINKONZO ZAKHO
8. AMALUNGELO AWAKHO NGOKWENKCAZO YAKHO
9. AKUNAKHONA KUNYE OKUFANELEKILEYO
10. IXESHA LONYAKA LOKUPHILA
11. INDLELA ESIKHUSELELA NGAYO IINKCUKACHA ZAKHO
12. INQUBOMGOMO YOQOQOQO
Central Clearing Ltd (apha "iNkampani" okanye "thina" okanye "FXCC" okanye "us"). Lo Mgaqo-nkqubo weNgcaciso uchaza indlela iFXCC iqokelela ngayo isebenzise kwaye ilawula ulwazi lomntu siqu kubathengi bayo abaxhamli kunye nabathengi abanakho. I-FXCC izimisele ukugcina ubumfihlo bakho. Ngokuvula i-akhawunti yezohwebo kunye neFXCC umxhasi unika imvume yokuqokelela, ukucubungula, ukugcina nokusetyenziswa kolwazi lomntu ngeFXCC njengoko kuchaziwe ngezantsi.
Yinkqubo yeNkampani yokuhlonela imfihlo yolwazi kunye nobuntu bodwa.
Lo Mgaqo-nkqubo weNgcaciso ujolise ukunika ulwazi malunga nendlela esiqokelela ngayo kunye neenkcukacha zakho zedatha, kubandakanywa nayiphi na idatha ongayinika nge website yethu xa ubhalisela kwiwebhusayithi yethu.
Kubalulekile ukuba ufunde le Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo kunye naluphi na isaziso sobumfihlo okanye isaziso sokusebenza ngokufanelekileyo esinokubonelela ngezinye iimeko xa siqokelela okanye sicwangcisa iinkcukacha zakho malunga nawe ukuze uqaphele ngokucacileyo ukuba sisisebenzisa njani kwaye kutheni sisisebenzisa idatha yakho . Lo Mgaqo-nkqubo uncedisa enye imigaqo-nkqubo kwaye ayihlose ukuba iwongamele.
Kwi-FXCC siqonda ukubaluleka kokugcina imfihlo yolwazi lomntu wethu kunye nokuzibophezela ekuqinisekiseni ukhuseleko lwaluphi na ulwazi olunikezwa ngabathengi bethu kule website.
FXCC Ingxelo yomgaqo-nkqubo weMfihlo iza kuhlaziywa ngezikhathi ezithile ukuqwalasela imithetho emitsha kunye nekhnoloji, utshintsho kwimisebenzi yethu kunye nezenzo kunye nokuqinisekisa ukuba ihlala ifanelekileyo kwiimeko eziguqukayo. Naliphi na ulwazi esilubambe luya kulawulwa yiNkcazo yeMigaqo-nkqubo yangasese. Umgaqo-nkqubo weNgcaciso woBucala uza kulayishwa kwiwebhusayithi yeFXCC. Ngaloo nto, abathengi bayavuma ukuba bamkele ukuthunyelwa kwePolisi yabucala ngokubuyiselwa kwikhompyutha kwiwebsite njengesaziso sangempela seFXCC kubaxhasi bayo. Ukuba kukho nayiphi na utshintsho eyenziwe yinto ebaluleke kakhulu ngoko siya kukuxelela nge-imeyli okanye ngesaziso kwiphepha lasekhaya. Nayiphi na ingxabano malunga noMgaqo-nkqubo woBucala we-FXCC ulawulwa kwesi saziso neSivumelwano Sabaxhasi. I-FXCC ikhuthaza abaxhasi bayo ukuba bahlaziye ngokukhawuleza le Mgaqo-nkqubo weMfihlo ukuze bahlale beqaphela ukuba yeyiphi i-FXCC eqokelela ulwazi, indlela ekuyisebenzisa ngayo kwaye ngubani na onokuyichazela yona, ngokuhambelana nemimiselo yalo Mgaqo-nkqubo.
Ukubonelela ngeenkonzo zemali kunye neenkonzo kubaxumi bethu ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo, xa ufaka isicelo sokubhalisa ukusebenzisa enye okanye ezininzi zeenkonzo zethu siza kukucela ulwazi lomntu siqu. I-FXCC inelungelo kunye nomsebenzi ngenxa yoshishino olwenziweyo, ukujonga ukuchaneka kwedatha egcinwe kwiinkcukacha ngezinye iinkcukacha kukucela ukuba ufumane ulwazi oluhlaziyiweyo olunikeziweyo okanye ukuqinisekiswa kokuchaneka koku kuchazwe ngasentla.
Uluhlu lolwazi lomntu esinokuqokelela lungabandakanya (kodwa alukhawulelwanga):
Igama elipheleleyo lomthengi.
Iilesi zekhaya kunye neelwimi.
Ikhaya kunye namanani oomnxeba womsebenzi.
Ifowuni / Inombolo yocingo.
Inombolo yePasipoti / okanye inombolo yesazisi.
I-ID ye-photo ekhutshwe nguRhulumente ngokusayinela.
Ulwazi malunga nesimo sengqesho kunye nemali engenayo
Ulwazi ngolwazi lwangaphambili lworhwebo kunye nokunyamezela ingozi.
Ulwazi malunga nemfundo noqeqesho
Idilesi yokuTyala kunye neNombolo yeNombolo yeRhafu.
Iinkcukacha zeMali ziquka [i-akhawunti yebhanki kunye neenkcukacha zekhadi lokukhokha]
Idatha yokuThengisa iquka [iinkcukacha malunga neentlawulo nakuwe].
Iinkcukacha zobuchwepheshe ziquka idilesi ye-intanethi ye-intanethi (IP), idilesi yakho yokungena, uhlobo lwesiphequluli kunye neenguqu, ukulungiswa kwendawo yendawo kunye nendawo, iifayile ze-plug-in kunye neenguqulelo, inkqubo yendlela yokusebenza kunye nespanish kunye nezinye i-teknoloji kumaziko osebenzisa ukufikelela kule website ].
Idatha yeProfayili ifaka [igama lakho lomsebenzisi kunye nephasiwedi, ukuthenga okanye iilayilwe ezenziwe nguwe, iimfuno zakho, ukhetho, impendulo kunye neempendulo zemphenyi].
Idatha yokuSebenza ibandakanya [ulwazi malunga nendlela usebenzisa iwebhusayithi yethu, iimveliso kunye neenkonzo].
Iinkcukacha zoThengiso kunye noNxibelelwano ziquka [ukhetho lwakho ekufumaneni ukuthengiswa okuvela kuthi nakwamalungu ethu esithathu kunye nokukhethwa kwintetho yakho yonxibelelwano].
Siphinde siqokelele, sisebenzise kwaye sabelane ngeenkcukacha ezihlanganyelweyo ezifana nedatha okanye iinkcukacha zabantu. Idatha ehlanganisiweyo inokufumaneka kwiinkcukacha zakho kodwa aziqwalaselwe njengedatha yakho yomthetho njengoko le datha ayibonakali ngqo okanye ingayibonakali sakho. Ngokomzekelo, sinokuhlanganisa i-Data Data Usage ukubala ipesenti yabasebenzisi abafikelela kwindawo ethile yewebhu. Nangona kunjalo, ukuba sidibanisa okanye sidibanisa iDatha edibeneyo kunye nedatha yakho eyimfihlo ukuze ichonge ngokuchanekileyo okanye ngokungathanga ngqo, siyiphatha idatha edibeneyo njengedatha yomuntu oza kusetyenziswa ngokuhambelana nale saziso sobumfihlo.
Asiqokeleli naluphi na uhlobo oluthile lweeNkcukacha zoLuntu malunga nawe (oku kuquka iinkcukacha malunga nohlanga okanye ubuhlanga, iinkolelo zenkolo okanye ifilosofi, ubomi besondo, ukuziphatha ngokwesondo, imibono yezopolitiko, ubulungu bunyunyana, ulwazi malunga nempilo yakho kunye nezofuzo kunye ne-biometric data) .
Singaqokelela ulwazi oluthe ngqo malunga nokusetyenziswa kweenkonzo zethu. Oku kungabandakanya ulwazi oluvela kuzo wena kunye / okanye inkampani yakho njengamaxesha owangena kuyo, ukusetyenziswa kwakho kweenkonzo, iintlobo zeenkcukacha, iinkqubo kunye neengxelo ozifumanayo, indawo ovela kuyo, ubude beeseshoni kunye nezinye iinkcukacha ezifanayo. Ulwazi oluqokelelweyo lunokufunyanwa ngokusemthethweni kumalungu esithathu, njengamagunya karhulumente, iinkampani eziye zazisa kwi-FXCC, iinkampani zokucwangcisa amakhadi, kunye nemithombo yoluntu efumanekayo esivunyelwe ngokusemthethweni ukuba siyenze.
Ukunxibelelana kwakho ngekhompyutheni kunye / okanye umnxeba kunye nathi kubhalwa kwaye yipropati yedwa ye-FXCC kwaye ibonisa ubungqina phakathi kwethu.
Unokukhetha ukubonelela nayiphi na okanye yonke inkcazelo yakho eyimfuneko. Nangona kunjalo, ulwazi olulahlekileyo lungabangela ukuba singakwazi ukuvula okanye ukugcina i-akhawunti yakho kunye / okanye ukukunika iinkonzo zethu
Siqokelela inkqubo kunye nokulawula ulwazi oluvumela ukuba senze izibophelelo zethu zesikontraka kunye nawe kwaye sihambelane neemfanelo zethu zomthetho.
Ngezantsi ziinjongo apho ulwazi lwakho lomntu luqhutyelwa ngayo:
Sisebenzisa idatha yakho ukuze sikunike iinkonzo kunye nemikhiqizo yethu, kwaye sikwazi ukugqiba inkqubo yethu yokwamkela ukuze singene kwisivumelwano esinxulumene nabaxhasi bethu. Ukuze sizalise umxhasi wethu kwi-boarding kufuneka siqinisekise ubungqina bakho, yenza umxhasi wokuzikhandla ngokwemiqathango yolawulo, kwaye kufuneka sisebenzise iinkcukacha ezifumanekayo ukulawula ngokufanelekileyo i-akhawunti yakho yorhwebo kunye ne-FXCC.
Uninzi lwezibophelelo zomthetho ezibekwe yimithetho echaphazelekayo esiyiyo, kunye neemfuno ezisemthethweni, umz. Imithetho yokuchasana nemali, imithetho yemisebenzi yezemali, imithetho yenkampani, imithetho yemfihlo kunye nemithetho yerhafu. Ukongezelela, kukho iziphathamandla ezahlukahlukeneyo zolawulo apho imithetho kunye nemimiselo isebenza kuthi, ebeka imfuneko yokucwangciswa kwedatha yokuhlolwa kwekhadi lokuthenga ngetyala, ukuhlawulwa kwentlawulo, ukuqinisekiswa kwesazisi kunye nokuthotyelwa kwimiyalelo yenkundla.
I-FXCC iququzelele iinkcukacha zomntu ngamnye ukuze kugcinwe iminqweno esemthethweni esilandelwayo okanye umntu wesithathu, apho inzala esemthethweni xa sinesizathu soshishino okanye nesorhwebo sokusebenzisa ulwazi lwakho. Nangona kunjalo, akufanele ihambe ngokungafanelekanga kuwe kunye nento enhle kuwe. Imizekelo yale mi sebenzi yokucwangcisa iquka:
Ukuqalisa inkqubo yeenkundla kunye nokulungiselela ukukhusela kwethu iinkqubo zetyala;
iindlela kunye neenkqubo esizenzayo ukubonelela nge-IT kunye nenkqubo yokukhuseleka kweNkampani, ukukhusela ulwaphulaphulo olunokuthi, ukhuseleko lwe-asethi, ukulawulwa kwemvume kunye namanyathelo okuchasa;
amanyathelo okulawula ibhizinisi kunye nokuphuhlisa iimveliso kunye neenkonzo;
Kungadingeka ukuba ulandele idatha yakho yangaphakathi kwiinjongo zoshishino zangaphakathi kunye nokugcinwa kwerekhoda, okusemandleni ethu okusemthethweni kwaye kuyadingeka ukuze kuhambelane neemfanelo zethu zomthetho. Siza kugcina iirekhodi ukuze siqinisekise ukuba uhambelana nezibophelelo zakho zesikontrakthi ngokulandela isivumelwano esilawula ubudlelwane bethu nawe.
Ngamanye amaxesha, umthetho ufuna ukuba sikucebise utshintsho oluthile kwimveliso kunye / okanye iinkonzo okanye imithetho. Singadinga ukukwazisa ngeenguqu ezinxulumene neemveliso kunye neenkonzo zethu, ngoko ke siya kuyanyanzelekile ukuba senze iinkcukacha zakho zobuqu ukuze sikuthumele izaziso zomthetho. Uya kuqhubeka ufumana le ngcaciso nokuba ukhetha ukungatholi ulwazi lokuthengisa ngokuthe ngqo kuthi.
Singasebenzisa i-data yakho yophando kunye nenjongo yokuhlalutya, kunye nembali yakho yokurhweba ukuze unikeze naluphi na uhlalutyo, iingxelo, iiprojekthi ezingakunomdla kwidilesi yakho ye-imeyile ebhalisiweyo. Nceda uqaphele ukuba uhlala unelungelo lokutshintsha ukhetho lwakho ukuba awufuni ukufumana olo xwebhu unxibelelwano.
Ukuba awufuni ukuba sisebenzise ulwazi lwakho lomntu ngale ndlela, nceda uthumele i-imeyli ku- support@fxcc.com ucele ukuba ungaqhagamshelwaniswa nayiphi na injongo yokuthengisa. Ukuba ungumthengi we-intanethi, ungangena ngemvume yakho Iprofayili yomsebenzisi we-Trader Hub kwaye ulungise izikhethiso zakho zesaziso nanini na.
Singasebenzisa ulwazi oluthile olunikezwa nguwe ukuqinisekisa ukuba imigangatho ephezulu xa kunika imveliso kunye neenkonzo zethu.
Injongo ephambili esisisebenzisa ngayo ulwazi lwakho lomntu ukuba sikwazi ukuqonda iinjongo zakho zezimali kwaye uqinisekise ukuba iinkonzo ezifanelekileyo zifanelekile kwiprofayili yakho. Ukongeza, le ngcaciso inceda iFXCC ukubonelela ngeenkonzo eziphezulu. Ngethuba singakuthumela izinto zokuthengisa (kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kwi-SMS okanye i-imeyile yonxibelelwano ukuba ukhangele, iifowuni zamanqaku okanye ezinye iinkcukacha) ngezikhathi esizicingayo ziya kuba luncedo kuwe, siyazi isidingo sokuhlonela yakho yobumfihlo. Ngaphandle kokuba ukwaziswa ngenye indlela, ulwazi oluthile esilubambileyo lusetyenziselwa ukuseka nokulawula i-akhawunti yakho, ukuphonononga iimfuno zakho eziqhubekayo, ukuphucula inkonzo yabathengi kunye nemveliso kunye nokunika ulwazi oluqhubekayo okanye amathuba okukholelwa ukuba anokufanelekile kuwe.
I-FXCC ayiyi kutyhila ulwazi lwakho lomntu ngaphandle kwemvume yakho yangaphambili, nangona kuxhomekeke kwimveliso okanye kwinkonzo echaphazelekayo kunye nemingcipheko ethile kwiinkcukacha ezibucayi, oku kuthetha ukuba ulwazi lomntu siqu lungabonakaliswa:
Ababoneleli ngeenkonzo kunye nabacebisi beengcali kwiFXCC abaye banikezelwa ngenkontileka ukuba basinikeze ulawulo, lwemali, i-inshurensi, uphando okanye ezinye iinkonzo.
Ukuzisa abadayisi okanye amaqabane esinobudlelwane bobuhlobo (nabani na onokuthi bangaphakathi okanye ngaphandle koMmandla wezoqoqosho lweYurophu)
Ababoneleli-mboleko, iinkundla, iinkundla kunye nezigunyazo zokulawula njengoko kuvunyelwene okanye kugunyaziswe ngumthetho
Ukunika ingxelo ngetyala okanye ii-arhente zethenkethi, ababoneleli benkonzo yesithathu yokuqinisekiswa, ukuthintela inkohliso, iinjongo zokuchasana nemali, ukuchonga okanye ukuhlolwa ngokukhawuleza komthengi
Nabani na ogunyazisiweyo ngumntu, njengoko kuchaziwe ngumntu okanye isivumelwano
Kwinqanaba leNkampani okanye nayiphi na inkampani kwiqela elinye leNkampani.
Xa kwenzeka ukuba kubonakale ukuba kuboniswe ngumthetho okanye nayiphi na igunya elilawulayo, kuya kwenziwa ukwenzela ukuba iFXCC ihambisane nayo nayiphi na imbopheleleko yomthetho, ikhusele ekukhohliseni ubuqhetseba, kwaye igcine izivumelwano zomniki-nkonzo. Xa kwenzeka ukuba kubhengezwe oko kubhengezwayo kuya kwenziwa 'ngesidingo sokwazi,' ngaphandle kokuba kulandwe ngenye indlela igunya elilawulayo. Ngokuqhelekileyo, sifuna ukuba imibutho engekho phantsi kwe-FXCC ephethe okanye ifumane ulwazi lomntu njengababoneleli ngeenkonzo kwi-FXCC yavuma ukuba yimfihlo yalolu lwazi, zenze ihloniphe ilungelo lomntu ngamnye lobumfihlo kwaye lihambelane neMigaqo-nkqubo yokuKhuselwa kwesiCwangciso kunye nalo mgaqo-nkqubo.
Kwezinye iimeko, sinokudlulisela ulwazi kumaqela esithathu ukuba sifanelekile ngokomthetho ukwenza njalo okanye ukuba sigunyazisiwe phantsi kwezibophelelo zethu zesikontraki okanye ezisemthethweni okanye ukuba sinikezelwe imvume yakho.
Singabonakalisa ulwazi lwakho lomntu kumntu wesithathu ukuba siphantsi komsebenzi wokubhengeza okanye ukwabelana ngolwazi lwakho lomntu ukuze uhambelane nayiphi na imbopheleleko yomthetho, okanye ukunyanzelisa okanye ukusebenzisa iSigqibo neMeko yeSayithi.
Ngokuthumela ulwazi lwakho, uyavuma ukusebenzisa i-FXCC yaloo ngcaciso, njengoko ichazwe kulo mgaqo-nkqubo. Ngokufikelela nokusebenzisa le nto uyavuma ukuba ufunde, uqonda kwaye uyavumelana nalo mgaqo-nkqubo. Sigcina ilungelo lokutshintsha umgaqo-nkqubo wethu wobumfihlo ngasinye ixesha kwaye siya kuhlaziya eli phepha ngokufanelekileyo. Nceda ubuyekeze umgaqo-nkqubo ngokubanzi kangangoko kunokwenzeka - ukusetyenziswa kwakho kweSayithi ngokuqhubekayo kuya kuthetha ukuba uyavuma naziphi na utshintsho.
I-Site inokuthi, ngezinye iinkcukacha, iqulethe ikhonkco kunye nakwiiwebhusayithi zamanethiwekhi ethu kunye kunye nabasebenzi. Ukuba ulandela ikhonkco kwiziko lewebhu, nceda uqaphele ukuba ezi website zineemigaqo-nkqubo yazo zangasese kwaye asamkeli nayiphi na imbopheleleko okanye uxanduva lwale nkqubo. Nceda ukhangele le nkqubo ngaphambi kokuba uthumele nayiphi na idatha yangomntu kwiiwebhusayithi.
Unako ukurhoxisa imvume yakho nangaliphi na ixesha, nangona naluphi na ukusetyenziswa kwedata yakho ngaphambi kokufumana ukucinywa kwakho akuyi kuchaphazeleka.
I-FXCC iya kugcina idatha yakho yobuntu ixesha elide sinobudlelwane bezoshishino nawe.
Ngokomthetho siyafuneka siphendule naziphi na izicelo zedatha kwiintsuku ze-30, ngaphandle kokuba uhlobo lwesicelo lufuna ixesha elingakumbi lophando nophando. Amalungelo anokufumaneka kuwe ngokumalunga nolwazi lomntu esilubambe ngalo ngalo luboniswe ngezantsi:
Fumana ukufikelela kwiinkcukacha zakho. Oku kukukunceda ukuba ufumane ikopi yedatha yakho siqu esiyibambe ngawe.
Cela ukulungiswa / ukulungiswa kwedatha yakho siqu esinazo malunga nawe. Oku kukukunceda ukuba ulungise nayiphi na idatha engaphelelanga okanye engachanekanga esinazo malunga nawe. Singacela ulwazi olongezelelweyo kunye namaxwebhu adingekayo ukuqinisekisa ukuba kufuneka ukutshintsha kwedatha.
Isicelo sokuchithwa kweenkcukacha zakho. Unokucela ukuba ususe idatha yakho, usebenzise ilungelo lakho "ukuba ulibaleke", apho kungekho sizathu esihle sokuba siqhubeke siyiqhuba. Esi sicelo sokususa idatha yakho siqu siza kubangela ukuvalwa kwe-akhawunti yakho kunye nokupheliswa kobudlelwane bamakhasimende.
Cela ukuba 'uvimbele' okanye ukhusele ukucwangciswa kweenkcukacha zakho kwiimeko ezithile, njengokuba ukhuphisana nokuchaneka kwelo lwazi lomntu okanye into ekuyisebenzisayo. Ngeke kusivimbele ekugcineni impahla yakho. Siza kukwazisa ngaphambi kokuba sigqibe ukungavumelani naluphi na umqathango oceliwe. Ukuba siye sazisa ulwazi lwakho lomntu kwabanye, siya kwazisa malunga nokuthintela ukuba kunokwenzeka. Ukuba usibuza ukuba, ukuba kunokwenzeka kwaye kuvunyelwe ukwenza njalo, siza kukuxelela nawe obani ukwabelana ngolwazi lwakho lomntu ukuze udibanise ngqo nabo.
Unelungelo lokuchasa iinkcukacha zakho ezicwangcisiweyo ngenjongo yokuthengisa ngokuthe ngqo. Oku kubandakanya ukuprofetwa ngokubanzi ngokunxulumene nokuthengisa ngokuthe ngqo. Ukuba unqwenela ukuqhutyelwa kweenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo, siya kuyeka ukucwangciswa kweenkcukacha zakho malunga neenjongo ezinjalo.
Into, nangaliphi na ixesha, nasiphi na iinqunto esinokuzithatha ezisekelwe ngokucwangcisa ngokuzenzekelayo (kubandakanya ukuprofayili). Ukuprofeta kubandakanya ukusetyenziswa kwetheknoloji esinceda senze izigqibo ngokuzenzekelayo, ngokusekelwe kwidata yakho eyimfihlo esiyiqokelela kuwe okanye kubantu besithathu.
Ngeke uhlawule umrhumo ukuze ufinyelele idatha yakho (okanye usebenzise namanye amalungelo). Nangona kunjalo, sinokuhlawulisa intlawulo efanelekileyo ukuba isicelo sakho sichaze ngokucacileyo, siphindaphinda okanye siphezulu. Okanye, sinokungafuni ukuthobela isicelo sakho kule miqathango.
Sizama ukuphendula kuzo zonke izicelo ezisemthethweni kwinyanga enye. Ngezinye izihlandlo kunokusithatha ixesha elide ngaphezu kwenyanga ukuba isicelo sakho sincomeke ngakumbi okanye wenze izicelo ezininzi. Kule meko, siya kukukwazisa kwaye sikugcine uhlaziywa.
Sizama ukuqinisekisa ukukhuselwa kolwazi olufakwe kuthi, kokubili ngexesha lokudluliselwa kwaye emva kokuba sisifumana. Sinolawulo olufanelekileyo lwezolawulo, ezobuchwepheshe kunye nezokuzikhusela ukukhusela i-Personal Data ngokukhawuleza okanye ukubhujiswa okungekho mthethweni, ukulahlekelwa ngengozi, ukuguqulwa okungagunyaziswanga, ukuchazwa okungagunyazisiyo okanye ukufikelela, ukungasebenzisi kakubi, kunye nayiphi na enye indlela engekho mthethweni yokusetyenziswa kweeNkcukacha zeNkcukacha. Oku kubandakanya, umzekelo, izikhuni, ukukhuselwa kwephasiwedi kunye nokunye ukufikelela kunye nokulawula ukuqinisekiswa.
Nangona kunjalo, akukho ndlela yokudluliselwa kwi-Intanethi, okanye indlela yokugcinwa kwekhompyutha, i-100% ikhuselekile. Asikwazi ukuqinisekisa okanye ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwaluphi na ulwazi olusithumelayo kwaye wenza njalo kwingozi yakho. Asinakuqinisekisa ukuba loo nkcazelo ayinakufikeleleka, ichazwe, ishintshwe, okanye isatshatyalaliswe ngokuphulwa kwanoma yiphina imithombo yethu yokukhusela ngokomzimba, ezobuchwepheshe. Ukuba ukholwa ukuba iDatha yakho yeeNkcukacha iyancitshiswa, nceda uqhagamshelane nathi.
I-FXCC inokugcina ulwazi lwakho kwiinkcukacha zayo zokubhenela ukuze uphendule imibuzo okanye isombulule iingxaki, unikezele ngeenkonzo eziphuculweyo kunye neenkonzo ezintsha kunye nokuhlangabeza nayiphi na imfuneko yokugcina idatha yezomthetho. Oku kuthetha ukuba singagcina ulwazi lwakho emva kokuyeka ukusebenzisa iSayithi okanye iinkonzo zethu okanye ngokunye ukusebenzisana nathi.
Iikhukhi ziincinci zecatshulwa ezigcinwe kwikhomputha yakho ukuze zisincede siqonde uhlobo lwesiphequluli kunye nezicwangciso ozisebenzisayo, apho ubuye kwiwebhusayithi, xa ubuya kwiwebhusayithi, apho uvela khona, kwaye uqinisekise ukuba ulwazi lwakho ekhuselekile. Injongo yale ngcaciso kukukunika amava afanelekileyo nakwi-FXCC, kufaka phakathi ukuhambisa amaphepha ewebhu ngokwezidingo zakho okanye ukhetho.
I-FXCC ingasebenzisa nabanikezeli beenkonzo zangaphandle abazimeleyo ukulandelela umzila kunye nokusetyenziswa kwiwebhusayithi. Iikhukhi zihlala zisetyenziswa kwiiwebhusayithi ezininzi kwi-intanethi kwaye unokukhetha ukuba kwaye i-cookie iza kwamkelwa njani ngokutshintsha okukhethwa kukho kunye neenketho kwisiphequluli sakho. Awukwazi ukufikelela kwezinye iindawo www.fxcc.com ukuba ukhetha ukukhubaza ukwamkelwa kwekhukhi kwisiphequluli sakho, ngakumbi iindawo ezikhuselekileyo zewebhusayithi. Ngoko ke sincoma ukuba uvumele ukwamkelwa kwekhukhi ukuzuza kuzo zonke iinkonzo kwiwebhusayithi.
Unelungelo lokugqiba ukuba uyayamkela okanye uyayinqanda i-cookies ngokubeka okanye ulungisa izikhangeli zakho ze-web browser ukuba zamkele okanye zikhuphe ii-cookies. Ukuba ukhetha ukulahla ii-cookie, usenokusebenzisa iwebhusayithi yethu nangona ukufikelela kwakho kwindlela ethile yokusebenza kunye neendawo zewebhsayithi yethu kunokukhawulelwa. Njengoko iindlela zokunqanda i-cookies kwi-browser ye-browser yakho iyahluka kwi-browser-to-browser, kufuneka uvakashele imenyu yenkxaso yomncedisi wakho ngolwazi olungakumbi.
Ukuba uqhubeka usebenzisa le website ngaphandle kokutshintsha izicwangciso ze-cookie zesiphequluli sakho sewebhu uze uvumelane nenqubomgomo yethu yecookie
Ukuze ufunde okungakumbi malunga nekiki kunye nendlela yokuphatha ngayo isiphequluli sakho / isixhobo nceda u tyelele www.aboutcookies.org
Ukuba ungathanda ukuqhagamshelana nathi kunye nayiphi na imibuzo okanye izimvo malunga nomgaqo-nkqubo wethu wobumfihlo, nceda ukhululeke ukudibana nathi nge-imeyile, idilesi yeposi, ifowuni kunye nefeksi okanye usebenzise indawo yethu yokuxoxa kwi-IM ummeli wenkonzo yamakhasimende.
UMthetho weBambiswano weNdlu, iKomul Highway,
EPort Vila, Vanuatu
Inombolo: + 44 203 150 0832